UKUI: Mpempe akwụkwọ Desktọpụ Oke maka Linux emere GTK na Qt | Site na Linux
UKUI: Mpaghara Desktọpụ dị fechaa maka Linux emere GTK na Qt
UKUI kọwara ndị mmepe ya dị ka ọkụ na ngwa ngwa Ebe obibi Desktọpụ wuru na a "Pluggable kpuchie" na Linux na nkesa ndị ọzọ nke ụdị Unix.
Ọzọkwa, a na-enye ya dị ka Ebe obibi Desktọpụ nwee ike ịnye ahụmịhe dị mfe ma na-atọ ụtọ maka chọgharịa, chọọ ma jikwaa kọmputa na-eji Teknụzụ GTK na Qt.
Tupu anyị abanye na nke a na-esote Akpọrọ Desktọpụ Environment UKUI (Ubuntu Kylin Ntuziaka Onye Ọrụ) Ọ dị mma icheta na, n'oge ndị ọzọ anyị ekwuola okwu na Gburugburu Desktọpụ ndị ọzọ, jiri ma na-atọ ụtọ, dị ka:
Deepin, arụsị y Budgie
Atọ n'Ime Otu na Moksha
1 UKUI (Ubuntu Kylin Ntuziaka Onye Ọrụ)
1.1 Gịnị bụ UKUI?
1.2 Kedụ ka UKUI dị?
1.3 Etu esi etinye ma / ma obu melite UKUI?
UKUI (Ubuntu Kylin Ntuziaka Onye Ọrụ)
Na nke a, anyị ga-elekwasị anya na Kedu ihe bụ na kedu ka UKUI? ikwado ihe ọmụma banyere ya na ndị niile omiiko Ndị Linux.
Gịnị bụ UKUI?
UKUI (Ubuntu Kylin Ntuziaka Onye Ọrụ) bu Desktop Gburugburu ebe izizi iji rụọ ọrụ - Ubuntu Kylin, nke bu Linux Distro nke mebere otu n’ime otutu nri ndi ozo nke Ubuntu nwere. Ọzọkwa, UKUI bụ n'ezie ndụdụ nke Matte Desktop Gburugburu.
Nke a na-eme ka ọ a Ìhè na ngwa ngwa desktọọpụ gburugburu ebe obibi, nke na-erepịa ihe ole na ole. E mepụtara koodu gị na teknụzụ GTK na Qt, nke na-enye arụmọrụ dị mma na arụmọrụ dị mma na-akpata ezigbo ahụmịhe onye ọrụ n'oge eji eme kwa ụbọchị. Ke adianade do, ya visual ọdịdị yiri Sistemụ arụmọrụ Windows 7, na-eme ka ojiji ya na mmejuputa ya na ndi oru ohuru n'èzí GNU / Linux.
Nke a na Desktọpụ Environment nwere 2 saịtị ntinye aka ebe anyị nwere ike inweta ozi niile na akwụkwọ gọọmentị gbasara ya. Ndị a bụ:
Na weebụsaịtị a, anyị nwere ike ịnweta ozi gọọmentị metụtara njirimara, mmepe (koodu, nchekwa, ntinye na ihe ndị ọzọ), obodo na otu mmepe nke UKUI. Na mgbakwunye, ọ na-enye ohere ịnweta akụkọ (akụkọ) banyere ya. Ugbu a UKUI na-aga ụdị nke 3.0.
Na weebụsaịtị a anyị nwere ike ịnweta ozi ndị ọrụ metụtara Ubuntu Kylin, nke, dị ka anyị kwuru na mbụ, na-abịa na ndabara, na kwuru Desktop Environment. Na mgbakwunye, ebe a anyị nwere ike ibudata ya, gụọ akụkọ (akụkọ), sonye na Community ma ọ bụ nweta Wiki ya. Ugbu a Ubuntu Kylin na-aga maka mbipute 20.04.
Kedụ ka UKUI dị?
UKUI Ọ kọwara dị ka:
Kensinammuo na mfe iji: Ọ nwere interface dị mfe nghọta na-adabaghị adaba na omume ndị ọrụ yana imepụta kọlụm abụọ na-eme ka ọdịnaya menu pụta ìhè.
Ike na nkenke: Ọ nwere ezigbo njikwa faili nke na-akwado ọrụ niile dị mkpa maka ijikwa faịlụ, ọkachasị ebe ọ na-etinye arụmọrụ a na-ejikarị eme ihe n'ọnọdụ kachasị dị mfe.
Na-adaba adaba ma kwụsie ike: Na-eme ka otu aka na-eji Ndenye Mwepụta Ogwe na Ndenye Desktọpụ Ndenye, nke na-eme ka arụmọrụ oge niile maka ndị ọrụ.
Uru ma dị mfe iji: Na-enye menu nke ọrụ n'ụdị ụdị, ebe ọrụ ndị a na-ejikarị eme ihe na ngalaba dị ka omume onye ọrụ.
Etu esi etinye ma / ma obu melite UKUI?
Bụrụ na nke iji Ubuntu Kylin, ma ọ bụ Ubuntu ma ọ bụ Linux Distro dakọtara, UKUI Enwere ike itinye ya ma melite ya n'ụzọ na-eso ya, na-eji PPA ndị a:
Na imelite dị otu ọhụrụ version dịnụ UKUI, ndị na-esonụ iwu ozugbo mgbe na-agbakwunye na nchekwa:
N'ọnọdụ nke m, m na-eji nke m Gbanyụọ nke onwe Linux MX akpọ Ọrụ ebube, nọchiri Ndị na-egwuputa ihe, nke na-adabere na ya Debian GNU / Linux, M nwere ike mfe wụnye ya na ndị na-esonụ nyere n'iwu iwu:
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «UKUI (Ubuntu Kylin User Interface)», akwụkwọ ọgụgụ «Entorno de Escritorio» ọzọ na-akpali, na ruo ugbu a, na-aga n'ihu na-ewu ewu na «Ubuntu Kylin» nakwa n'ihi na ọ dị ka ya windo interface, nwee nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » UKUI: Mpaghara Desktọpụ dị fechaa maka Linux emere GTK na Qt
Mozilla amaliteworị site na mmalite nke Enhance Tracking Protection 2.0 na Firefox